Jery taratra… : olana etsy sy eroa… | NewsMada
Jery taratra… : olana etsy sy eroa…
Tsy mitsaha-midangana ny vidim-piainana. Miakatra ny vidim-bary, solika, saran-dalana… Nikoropaka ny fitondram-panjakana: namoaka vahaolana famonoana afo toy ny mahazatra, raha ny lafiny fahasahiranam-bahoaka. Eo ny fijerena sy fanaraha-maso ny fanafenam-bary, ny fanomezana vola fanampiana ny mpitatitra, ny famerana ny fampiakarana ny vidin-tsolika ho isaky ny enim-bolana…
Olana iainan’ny vahoaka isan’andro ny tsy fandriampahalemana, ny lozam-pifamoivoizana efa ho lava ka mila tsy hahataitra … Niteraka resabe ny amin’ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain’olona 47 tany Anjozorobe. Tsy nandrenesam-peo ny fitondrana foibe: tsy nanambara fisaonam-pirenena. Voalaza fa naiditra am-ponja ny tompon’ny fiara sy ny mpamily nahatonga ny loza.
Mbola tsy hahitam-panafana ny amin’ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Nilaza ny eo anivon’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) fa tsy mahita vahaolana, ary tsy mbola fantatra izay tena mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Tokony hatao ny fikaonandoham-pirenena amin’izay voakasik’izany. Laharam-pahamehan’ny sendikà ny fampahafantarana ny vahoaka ny lalàna.
Nanao vela-kevitra ny amin’ny fifandraisana diplaomasia eo amin’ny fiketrahana masin’i Vatikana ny sekreteram-panjakana, ny kardinaly Pietro Parolin, nitsidika teto Madagasikara. Mifantoka amin’izay tsy hisian’ny fifandonana izany. Eo koa ny fifampidinihana, ny fijerena ny soa iombonana… Tonga nanatrika izany ny mpanao politika maro, na eo amin’ny fitondrana na mpanohitra.
Tsy mbola ato ho ato ny fanovana na fanamboarana ny governemanta, raha ny filazan’ny filohan’ny Repoblika. Mbola mila fanadihadiana ny rafitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny minisitera tsirairay avy amin’ny hahazoana mampiasa tsara ny trosa avy any ivelany amin’ny fomba haingana sy hahitana vokatra mahomby eo amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Saika tsy misy afa-tsy olana izany rehetra izany. Manampy trotraka ny mpitondra tsy mahavaha olana: mizaka fahasahiranana ny vahoaka, mizaka ny tsy fahombiazan’ny mpitondra koa.